Ndi IWCA - International Writing Centers Association
Mmekọrịta IWCA bụ otu ndị guzobere mmekọrịta dị mma na IWCA; Imirikiti bụ mkpakọrịta etiti mpaghara mkpakọrịta na-eje ozi na mpaghara mpaghara. Otu dị iche iche nwere mmasi ịbụ ndị mmekọ nke IWCA nwere ike ịhụ usoro dị n'okpuru wee gakwuru onye isi ala IWCA.
Mgbakwunye IWCA dị ugbu a
Middle East / North Africa Ederede Centers Alliance
Lọ Ọrụ Na-ede Akwụkwọ Ọchịchị Canada / mkpakọrịta Canadienne des centres de rédaction
Associationlọ Ọrụ Na-ede Akwụkwọ Ọgụgụ Europe
La Red Latino Americana de Centros na Mmemme Escritura
Ebe Ọwụwa Anyanwụ
Colorado na Wyoming Writers Tutor Conference
N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ
GSOLE: Global Society of Online Mmụta na ndị nkuzi
SSWCA: Schoolslọ Akwụkwọ Secondary School Writing Association
Comingghọ onye mmekọ IWCA (site na Iwu IWCA)
Ọrụ nke ndị otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka idekọ ederede bụ inye ndị ọkachamara na-ahụ maka ide ederede mpaghara, ọkachasị ndị nkuzi, ohere iji zute ma gbanwere echiche, igosi akwụkwọ, yana isonye na nzukọ ndị ọkachamara na mpaghara ha ka mmefu njem ghara igbochi.
Iji mezuo ebumnuche ndị a nke ọma, ndị mmekọ kwesịrị, opekata mpe, debe usoro ndị a n'ime afọ mbụ nke njikọ nke IWCA ha:
Na-enwe nzukọ mgbe niile.
Okwu a chọrọ maka atụmatụ ọgbakọ ma kwupụta ụbọchị ọgbakọ na mbipụta IWCA.
Ndị ọrụ ahọpụtara, gụnyere onye nnọchi anya maka ọgbakọ IWCA. Onye ọrụ a ga-arụsi ọrụ ike na ndepụta nke kọmitii ahụ ma ga-aga nzukọ nzukọ ma enwere ike.
Dee usoro iwu ha nyefere IWCA.
Nye IWCA na njikọta nzukọ agbakwunyere mgbe a jụrụ gị, gụnyere ndepụta ndị otu, ozi kọntaktị maka ndị otu ụlọ, ụbọchị nzukọ, ndị na-ekwu okwu ma ọ bụ nnọkọ, mmemme ndị ọzọ.
Nọgide na-enwe ndepụta ndị nọ n'ọrụ.
Soro ndị otu na - ekwukọrịta site na ndepụta nkesa na - arụ ọrụ, websaịtị, listerv, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ (ma ọ bụ njikọta ụzọ ndị a, na - agbanwe dị ka teknụzụ na - enye ohere)
Mepụta atụmatụ nke ịjụta ajụjụ, ịdọ aka na ntị, ịkparịta ụka n',ntanet, ma ọ bụ ijikọ nke na-akpọ ndị isi ụlọ ọrụ ederede na ndị ọkachamara ọhụụ n'ime obodo ma nyere ha aka ịchọta azịza nye ajụjụ na ọrụ ha.
Na nloghachi, ndị mmekọ ga-enweta agbamume na enyemaka site na IWCA, gụnyere ịkwụ ụgwọ kwa afọ iji kwụọ ụgwọ nke ndị isi okwu ogbako (ugbu a $ 250) na ozi kọntaktị maka ndị otu nwere ike ibi na mpaghara ahụ ma bụrụ ndị IWCA.
Ọ bụrụ na ndị mmekọ enweghị ike ị nweta ntakịrị ihe achọrọ edepụtara n'elu, onye isi oche IWCA ga-enyocha ọnọdụ ndị ahụ wee mee nkwanye na bọọdụ ahụ. Boardlọ ọrụ ahụ nwere ike ịme ka ụlọ ọrụ mmekọ ahụ nwee ike site na ntuli aka nke abụọ n'ụzọ atọ.